China Angus rattan round table Ukukhiqiza kanye Factory |I-Tailong
Ukuma okulula nokulula kwetafula eliyindilinga le-Angus rattan, isakhiwo sendabuko esinemilenze emine, kunikeza itafula lokudlela izici eziqinile.Limelela idizayini yefenisha ukuze kunwetshwe isiko kuyilapho, futhi yenze isihloko sesimanjemanje.Lesi sihlalo se-rattan siye samelana nokuhlolwa isikhathi, kuhlanganiswe nezinhlobonhlobo zezinto, futhi kusakhanya ngokucwebezela okuhlukile namuhla.
OKUKHANGISAYO FUTHI KWEHLUKILE
Ikunikeza indawo yokudlela ekahle ukuze ujabulele imibuthano nezivakashi zakho, ifenisha ye-wicker yangaphandle yenziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu ze-PE rattan kanye nohlaka lwe-aluminium olugcotshwe ngempushana oluqinisekisiwe ukuthi luzohlala isikhathi eside, luze netafula lengilazi elingu-5mm elifudumele ukuze udale. isitayela esihlukile.
Idizayini yayo yokuluka ekhangayo ngo-"1+1" yendabuko kanye nezitayela zesimanje zihlangana ukuze zakhe ukwakheka komumo we-H, okubaluleke kakhulu, ingxenye ephambanayo emaphakathi ngaphansi kwetafula inikeza indawo eyengeziwe yokugcina amathoyizi noma izincwadi.
UKUNAKEKISWA OKUNIKILIZIYO KANYE OKUPHANSI
I-PE wicker ayisebenzi nje kuphela kodwa futhi yengeza isici sesitayela esiyinkimbinkimbi nobuhle kufenisha yakho yangaphandle.I-PE wicker rattan kanye nengilazi epholile engaphezulu kwetafula kokubili kulula ukuzihlanza ngendwangu emanzi.
Angus itafula eliyindilinga
I-Angus Rattan Round Table Display
Okwedlule: Itafula lokudlela le-Eago rattan
Olandelayo: Isihlalo sokudlela se-rattan esinelanga